DOWNLOAD ရုပ်ရှင်တွေလေယာဉ်ပျံ & ပျံကားများ FS2004 - Rikoooo
အရွယ် 4.4 ကို MB
downloads ရယူရန္ 11 133
Author: မရဏစက်မဲ့လေယာဉ်, Stargates, Piglet Conrad
ဤတွင်သုံးစိတ်ကူးယဉ်လေယာဉ်များဖြစ်ကြသည်။ လေယာဉ်၏ဤအမျိုးအစားကိုကြိုက်သောသူတို့အဘို့ပျံသန်းဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့။ အလွန့်အလွန်အစာရှောင်မြန်နှုန်း! ပျော်ရွှင်ပါစေ ! မော်ဒယ်: Greyshade GSH-01 အ Clone Star Wars ၏ရုပ်ရှင်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွင်တွေ့မြင်။ အ Stargate စီးရီးတွင်တွေ့မြင်သခွေငျးတရားစက်မဲ့လေယာဉ် Goa'uld ။ တီဗီစီးရီး၏ Gerry Anderson ကရဲ့ "စူပါ" စူပါ (1961) ။